TETIKASA « TANA-MASOANDRO » : Hitafa mivantana amin’ny mponin’ Ambohitrimanjaka ny Filoham-pirenena
Eny Ambohitrimanjaka no toerana voatondro hananganana ny tetikasa Tanà- Masoandro. 21 janvier 2020
Tetikasa tanterahin’ny fitondram-panjakana entina hananganana tanàna vaovao hamahana ny fivangongoan’ny mponina eto an-drenivohitra izy ity ary efa vina napetraky ny Filoha Andry Rajoelina talohan’ny nirotsahany ho Filoham-pirenena. Araka ny fantatra, 88km tsy mivadimandry no velaran’ity Antananarivo ity ary izany dia noforonina ho an’ny olona manodidina ny 300 000 isa. Amin’izao fotoana izao nefa, efa tafakatra 3 tapitrisa mahery ny mponina eto.
Vokany, voasokajy ho anisan’ireo renivohitra be mponina indrindra eran-tany Antananarivo ary tsy maharaka ny filàna intsony ny velaran-tany sy ny fotodrafitrasa misy. Vantany vao avy ny orana dia miakatra ny rano ary tsentsina avokoa ireo toeram-pamoahan-drano rehetra.
Noho ireo antony ireo indrindra dia mbola nanamafy ny Filoham-pirenena fa tsy maintsy atao ny famoronana tanàna vaovao. « Hamorona tanàna vaovao isika, tanàna vaovao tsy hisian’ny dibo-drano, hamahana ny olan’ny fitohanana fifamoivoizana eto an-drenivohitra, afaka hifamezivezena an-kalalahana ary hahitana ny biraon’ny Minisitera isan-tokony », hoy ny fanazavana. Nanantitrantitra koa ny Filoha fa hisy ny fifampiresahana sy fifanakalozan-kevitra mivantana amin’ny mponina eny Ambohitrimanjaka hahafahana manangana ny tetikasa.
« Mety nisy fahadisoana taty amin’ny mpanatanteraka tamin’ny fomba nanombohana ny tetikasa, tsy ampy ny fifampiresahana na dia efa natao avokoa aza izay voalazan’ny lalàna rehetra, izay no nahatonga ahy niteny hoe ajanony aloha io dia tohizana indray ny fifampiresahana. Horaisiko ny andraikitra ary izaho mihitsy no hiresaka mivantana amin’ny olona eny Ambohitrimanjaka », hoy izy. « Mbola mamerina ny velirano nataoko tamin’ny Malagasy aho, tsy maintsy tafita ny firenena, tsy renivohitra manana ny hasiny intsony ity Antananarivo ity raha tsy mamorona tanàna vaovao isika. Ho voan’ny tondra-drano sy ho sempotra eto isika raha avela amin’izao ity Antananarivo ity fa tsy hitarina », hoy hatrany ny fanazavana.